Shiinaha 8011 Foornada Aluminium ee Warshada Xidhmada Cunnada iyo soo saarayaasha |Zhanzhi
Duubista aluminiumka waxaa lagu soo saaraa xaashida duuban ee laga soo tuuray aluminium billet ah oo dhalaalaysa, ka dibna dib ugu roga xaashida iyo biibilaha duubista ilaa dhumucda la rabo, ama iyada oo si joogto ah u shubaya iyo duubid qabow.
Foornada aluminiumku waa filim bir ah oo jilicsan, kaas oo aan ahayn oo kaliya faa'iidooyinka iska caabbinta qoyaanka, hawo-mareenka, hooska, caabbinta caabbinta, ilaalinta udgoonka, waxyeello iyo dhadhan la'aan, laakiin sidoo kale waa sahlan tahay in la farsameeyo qaababka quruxda badan iyo qaababka midabada kala duwan sababtoo ah silvery quruxsan. dhalaal cad.
1.Alaabada: 1000, 3000, 5000, 8000 Taxane
3. Dhumucdiisuna: 0.006 ~ 0.2mm
Caleenta aluminiumku waxay leedahay muuqaal nadiif ah, nadiif ah oo dhalaalaya.Waxaa lagu samayn karaa qalab isku dhafan oo leh qalab badan oo kale, iyo saameynta daabacaadda dusha sare ee aluminiumku way ka fiican tahay alaabta kale.Intaa waxaa dheer, biraha aluminiumku wuxuu leeyahay sifooyinka soo socda:
1. Dusha sare ee bireed aluminium aad buu u nadiifsan yahay waana nadiif, mana jirto bakteeriya ama bakteeriya ka bixi karta dusheeda.
2. Baakadaha aluminiumku waa baakad aan sun ahayn, taas oo si toos ah ula xiriiri karta cuntada iyada oo aan wax khatar ah ku ahayn caafimaadka aadanaha.
3. Baakadaha aluminiumku waa wax aan dhadhamin oo aan ur lahayn, taas oo aan ka dhigi doonin cuntada baakadaysan wax ur gaar ah.
4. Haddii aluminium-foil-ka laftiisu aanu ahayn mid kacsan, iyada iyo cuntada baakadaysan weligood ma engegi doonaan mana luminayaan.
5. Wax dhib ah maleh heerkulka sare ama heerkulka hooseeya, ma jiri doonto dhexgalka saliida ee aluminium.
6. Foornada aluminiumku waa qalab baakad ah, sidaas darteed waa baakad wanaagsan oo loogu talagalay alaabooyinka ay iftiimiyaan iftiinka qorraxda, sida margarine.
7. Foornada aluminiumku waxay leedahay caag wanaagsan, sidaas darteed waxaa loo isticmaali karaa in lagu xidho alaabta qaababka kala duwan.Waxa kale oo laga samayn karaa weel qaabab kala duwan leh marka la doono.
8. Aluminium foil waxa uu leeyahay qallafsanaan aad u sarreeya iyo awood cufan, laakiin itaalkeedu waa yar yahay, markaa way fududahay in la jeexjeexo.
9. Duubka aluminiumka ah laftiisa laguma xidhi karo kuleyl, waana in lagu dahaadhay walxo kuleyl ah, sida pe, ka hor inta aan lagu xirin kuleyl.
10.Marka biraha aluminiumku ay la xiriiraan biraha kale ee culus ama kuwa culus, waxaa jiri kara fal-celin xun.
Foil-ka aluminiumka waxaa si weyn loogu isticmaalaa cuntada, cabitaannada, sigaarka, daawooyinka, taarikada sawirrada, waxyaabaha lagama maarmaanka u ah guriga, iwm, waxaana badanaa loo isticmaalaa sida alaabteeda;Qalabka korantada ee korantada;Qalabka dahaarka ee dhismayaasha, baabuurta, maraakiibta, guryaha, iwm;Waxa kale oo loo isticmaali karaa sida dahab lagu qurxiyo iyo dun qalin ah, wallpaper, ganacsiga qurxinta ee alaabta daabacan ee kala duwan iyo alaabta warshadaha fudud, iwm.